Heart for — Steemit
ကျွန်တော့်ဘဝမှာ လူနဲ့ မလိုက်အောင် ကြီးမားတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံရှိတယ်။ ကံကောင်းမှုလို့ပဲပြောရမလား မသိပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ ဘဝရဲ့ ဆုလာဒ်တစ်ခုလို့မှတ်ယူထားတယ်။
Super Natural ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာ ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ပျော်စရာအချိန်တွေကို ပြန်ရတဲ့နေရာလို့ပြောသွားတယ်။ အဲဒါသာအမှန်ဆို ကျွန်တော့ကောင်းကင်ဘုံက အတော်ကြီးရောပေါ့။ ကျွန်တော့ဘဝမှာ စာပေ။ ဂီတ။ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ ပျော်စရာအတိတ်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့ဘဝအစဟာ သီချင်းနဲ့စခဲ့တယ်ပြောရမယ်။ ကျွန်တော်မွေးတဲ့အချိန်တုန်းက အဆိုတော်လွှမ်းမိုး ခေတ်ကောင်းတုန်းအချိန်လေ။ အဖေက ကျနော့ပုခတ်ကိုလွှဲပီး သီချင်းဆိုသိပ်တဲ့အခါ လွှမ်းမိုးရဲ့ မိုးစက်တင်လေနဲ့ ရေပြာလှိုင်း သီချင်းနှစ်ပုဒ်ပဲ ကျွန်တော်နားထောင်တယ်တဲ့။ အဲဒီသီချင်းတွေမဆိုရင် ငိုတယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီကစတဲ့ ပြသနာက လွှမ်းမိုး ရဲ့ အဲဒီ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကိုအသက်ကြီးလာလို့ ပြန်နားထောင်တဲ့အခါ အလိုလိုအလွတ်ရနေရော။ကျွန်တော့ ကလေးဘဝတစ်လျှောက်မှာကတ်ဆက်ဘအကြီး တွေ နားကျပ်ကတ်ဆက်တွေက အတော်လေးနေရာယူခဲ့တယ်။ အများဆုံးနားထောင်ဖြစ်တာ စိုးလွင်လွင်။
VCD ခေတ်ဦးမှာ အောက်စက်လေး စဝယ်တုန်းက ဗဒင်ရဲ့ ယောက်ဖရေသီချင်း ခေတ်ကောင်းနေပီ။ ဘယ်အချိန်ပြန်တွေးတွေး အဲဒီအချိန်လေးတွေ အမှတ်ရမိတယ်။ သီချင်းနားထောင်လိုက် ဘောပင်လေးနဲ့ ခွေပြန်ရစ်လိုက်နဲ့ တစ်ကယ့်ပျော်စရာအချိန်လေးတွေ။
ခေတ်သီချင်းကို စနားထောင်တတ်တာ BIG BAG ရဲ့ နွေဦး သီချင်းကနေစခဲ့တယ်ဆိုရမယ်။ အဲဒီတုန်းက၇ တန်း။ ပက်ကြားအက်နေတဲ့ရင်ဘက်ရယ် ဥသြငှက်သံရယ် ရယ် ဘာမှမဆိုင်ပဲ ကျွန်တော် နွေဦးရဲ့ လွမ်းဆွတ်မှုကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ အခုအချိန်ထိ အဲဒီသီချင်းပြန်နားထောင်တိုင်း ၇ တန်းနှစ်က စာသင်ခန်းထဲကို နွေဦးမှာပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ။ ကျွန်တော် သဘောကျမိတဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေးရဲ့ အိမ်နာမည်က နွေဦးတဲ့လေ။
မကြာပါဘူး MP3 လေးတွေစပေါ်တာနဲ့ အိမ်ကိုပူဆာတော့တာပဲ။မှတ်မိသေးတယ် အဲဒီအချိန်တုန်းက Korea myanmar ဆိုပြီး မြန်မာသီချင်းကို korea ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ vcd ထုတ်ရောင်းကြတာ။ အဲဒါတွေဝယ်ရင်း မုန့်ဖိုးကုန်ရောပဲ။
အဲဒီတုန်းက အရမ်းကြိုက်ခဲ့ ခံစားခဲ့ရတဲ့ သီချင်းတွေ အခု ဘယ်မှာမှရှာမရတော့ဘူး။ VCD တွေပျက်။ အဆိုတော်နာမည်မသိ။ ဒါပေမယ့် တစ်ပိုင်းတစ်စစီတော့ အလွတ်ရနေတုန်းပဲ။
၉ တန်း ၁၀ တန်းရောက်တော့ပိုဆိုးလာတယ်။ ကျွန်တော့ စာကြည့်စားပွဲမှာ အောက်စက်နဲ့ ဆောင်းဘောက်၂ လုံးနဲ့။ သီချင်းဖွင့်ထားမှ စာလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့် ဖြစ်သွားတော့တယ်။ သီချင်းနားထောင်မှ ဦးနှောက်ရှင်းပြီး စာကျက်လို့ရတဲ့ ကိစ္စကို အမေကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော် မရှင်းပြတတ်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ကိုးတန်း B အခန်းကနေ ဆယ်တန်း A အခန်းရောက်လာတော့ အမေဘာမှမပြောတော့ဘူး။ အဲဒီခေတ်တုန်းက စာတော်မှ A အခန်းရတာလေ။
ဆယ်တန်းနှစ်မှာ ကျွန်တော့် ချစ်သူနဲ့ စတွေ့ခဲ့တယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော်လက်ထပ်မယ့်သူပေါ့။ ကျွန်တော့အိမ်မှာ ဝိုင်းဖွဲ့ကျူရှင်သင်ရင်း သူများသိလာမလားလို့ ဆရာမလာခင်အချိန်တိုင်းသူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီး သီချင်းတွေအကျယ်ကြီးဖွင့်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းပြီးလို့ ချစ်သူတွေဖြစ်လာမှသိလိုက်ရတာက သူမသိခဲ့တဲ့အပြင်အဲဒီသီချင်းသံတွေကို နားငြီးလွန်းလို့ ကျွန်တော့ကို တော်တော် အမြင်ကပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော် ဆယ်တန်းကို ဆေးကျောင်းအမှတ်မီအောင်ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်။ သီချင်းဖွင့်ပြီးစာလုပ်တာ။ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုသဘောကျတာက ဆယ်တန်းရလာဒ်ကို ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောရင် ကျွန်တော် ငြင်းရလိမ့်မယ်။
န w lanu sarrko hpya ng htarrpar .နw lanu sarr har aararrarko ya mang nong tay . at ya n aytarbh wamwar luu nell့  m lok ayaarng ya kee marr tell့ နw lanu sarr tahc hcanu rwi tay . kanay karng mှု lo့  pellay ya parramalarr m siay p m y koy koy koaytar bhawarell့  su lard tahc hkulo့  mwt yuuhtarr tay . Super Natural jart karr rell့  jart wang hkan tahc hkumwar aykarng kang bhanusotar koybh w rell့  ayut ar hc rar aahk in aytyako ya pan ratell့  ayn rar lo့  ay ya par syarr tay . aelldar saramwnso at ya n aytar aykarng kang bhanuk aay tar ya kee ayraray par . at ya n aytar bhawamwar hcaray p . get . rup rwng aytya nell့  ya p ny ayn tell့  ayut ar hc raratit ya kee tahc hku rwi hkell့  tay . sehk ng aytya nell့  pat sat hkell့  tell့  at ya n aytar bhaw aay ya karngarang ay ya par ya p may . at ya n aytar bhawahcahar sehk ng nell့  hc hkell့  tay ay ya par r may . at ya n aytar aymya tell့  aahk in tunkasoay tar lွှ m moe ayhkat aykarng tun aahk in ayl . aay hpak at aynar pu hkat ko lွှ ellpee sehk ng so sip tell့ aahkar lွှ m moe rell့  moe hcak tang ayl nell့  ayrya par lှု ing sehk ngနw hc pudpell at ya n aytar narr ayhtarng tay tell့  . aellde sehk ng aytya m so rang ngo tay so pell . aellde k hc tell့  ya p s nark lွှ m moe rell့  aellde sehk ngနw hc pud koasak ya kee lar lo့  ya pan narr ayhtarng tell့ aahkar aaloloalyat raynay rar . at ya n aytar kay l bhaw tahc ayl wark mwar kat sak bh ayakee aytya narr at p kat sak aytyak aay tar ayl ayn rar yuu hkell့  tay . aam arr sanu narr ayhtarng ya hpahctar hcui lyang lyang . VCD ayhkat umwar ayaark hcak ayl hc way tunkbdang rell့  ayyark hpay r sehk ng ayhkat aykarng ayn pe . bhay aahk in ya pan aytya aytya aellde aahk in ayl aytyaamwt r mi tay . sehk ng narr ayhtarng lok aybhar pang ayl nell့  ayhkyaya pan rahc lok nell့  tahc k y ayut ar hc rar aahk in ayl aytya . ayhkat sehk ng ko hc narr ayhtarng tattar BIG BAG rell့  ayန ya u sehk ng kayn hc hkell့  tay so r may . aellde tun k7tan . pak ya karr aak ayn tell့  rang bhak ray uြ s ngwk san ray ray bharmw m songpell at ya n aytar ayန ya u rell့  lyam syat mှုko hkanhcarr lok r tay . aahku aahk inhti aellde sehk ng ya pan narr ayhtarng tong7tanနw hck hcar sang hkanhtellko ayန ya u mwar ya pan ayrark syarr salopell . at ya n aytar say bharat mi tell့  hk hchc raray karng may l rell့  aim nar manyk ayန ya u tell့  ayl . mya karparbhuu MP3 ayl aytya hcay pါ် tarnell့  aim ko puu saray tar tarpell . mwt miay s tay aellde aahk in tunk Korea myanmar so yapee ya man mar sehk ng ko korea rup rwng aytya nell့  vcd htut ayrarng ya k tar . aell daray tya way rang mun့  hpoe kun ayrar pell . aellde tunkaram ya kok hkell့  hkanhcarr hkell့  ratell့  sehk ng aytya aahku bhay mwar mw rwar maray tar bhuu . VCD aytyaut k .asoay tar nar many masi . daray p m y tahc pong tahc hc hceaytaralyat rayn tun pell .9tan 10tan ayrark aytar posoelar tay . at ya n aytar hcar ya k ny hcarr pyaellmwar ayaark hcak nell့  aysarng aybhark2lanu nell့  . sehk ng hpya ng htarrmw hcar lup tat tell့  aaat ng ya hpahc syarr aytar tay . sehk ng narr ayhtarngmw u ayန wark rwng yapee hcarat k lo့  ratell့  kihc္စko aay m ko narr lany ayaarng at ya n aytar m rwng ya p tat hkell့  bhuu . daray p m y at aynar koe tan Bahkankayn say tan Aahkan ayrark laraytar aay m bharmw may ya paray tar bhuu . aell deay hkat tunk hcaray tar mw Aahkan r taray l . say tanနw hc mwar at ya n aytar hk hc suu nell့  hcay tya့  hkell့  tay .ahkuaytar at ya n aytar lak htap m y suuay par . kya n aytar
aimmwar wong hpyaell့  atူrwng sang rang suum arr silar malarr lo့  sararm lar hkang aahk in tong suu့  ko rany ryay yapee sehk ng aytya aaat y ya kee hpya ng hkell့  tay . ayat arng ya pee lo့  hk hc suuay tyaya hpahc lar mw si lokratark suumasi hk့  ell tell့  aya pang aellde sehk ng sanay tyako narr ya ngee lyan lo့  at ya n aytarko aytar aytar aya mang kap hkell့  tay sotarparpell . at ya n aytar say tanko ays ayat arngamwt meay aarng ay ya hp nong hkell့  tay . sehk ng hpya ng ya pee hcar lup tar . aykarng may l tahc ayyark ko say bharat tark say tan r lardko hti hkok nong tay lo့  ay ya par rang at ya n aytar ya ngang r li m may .
SMT 25 (@leoxin): Open heart. The heart can see everything. My life is not as frivolous big love. Multiplied themselves do not know, but good luck but I eventually married life isareward. One of the film Super Natural England it is justafun time in my lifeaday. In fact, it is great in heaven. Secular literature. Music. There wasamovie filled with fun in the past. Who talked about his music and life အရငျပွောပွမယျ. My life is music and talk. The singer was born at the time still dominated era. My father was my turn the cover song, then very မိုးစကျတငျလေ blue waves and listening to music နှဈပုဒျ. These songs do not cry if. This isaproblem that influences the music နှဈပုဒျ released automatically when listening to old age. Throughout my childhood card the card takes up quite stuffed. Most see စိုးလှငျလှငျ listen. VCD era when purchased at machines ဗဒငျ ယောကျဖရေamusic era. I was expecting from Australia when I remember that time. I listen to musicapen, I rewindareally fun time with the kids. Times you can listen to the song from the music of BIG BAG Spring resolve. At that time, 7. Relationship between crackalaugh if the sound of birds in the spring, I'm nothing လှမျးဆှတျမှု felt. Now hear this song7years seemed to spring back into the classroom. သဘောကမြိတဲ့ ခဈြစရာကောငျမလေး Aliases spring. Soon MP3 porters and started hot house kids remember. 'At that time, Korea myanmar Myanmar korea movie VCD sold. Bread bought these values. Really enjoyed that time can not find where the music. VCD is broken. Know the name of the singer. But still partial empty.9grade 10 grade worsened. I looked under the table witha2-box version winter. The opening song began works လုပျတတျတဲ့ happens. For the brain to listen to music, learning to understand the issue, did not explain. But from my nine-room B Table A chap arrived, he refused to do. During this period, he wasaback room. Tenth grade year, my boyfriend စတှခေဲ့တယျ. Now, I'm not really married. Formagroup tutoring at home before you know whether targeting him all the time, I was playing loud music. After school, to become lovers learned unknowing as well as music, I was very tired, I view angles. I could point the standard medical school. To open music. ကောငျမလေးတဈယောကျကို is pleased with the sponsorship could affect the results, if we will refuse.
esteem good-karma life time knowledge